Muslimiin careysan ku banaanbaxdey Barack Obama oo booqanaya London + Sawiro – SBC
Muslimiin careysan ku banaanbaxdey Barack Obama oo booqanaya London + Sawiro
Tobanaan muslimiin ah ayaa maanta isagu soo baxay bartamaha magaalada London gaar ahaan kadinka hore ee xafiiska 10 Downing Street ee Ra’isalwasaaraha Britain David Cameron oo kulan halkaasi kulalahaa Madaxweynaha Mareykanka Barack Xuseen Obama oo booqasho ku jooga wadanka UK.
Banaanbaxayaasha oo sida boorar ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan Madaxweyne Obama isla markaana ay ku tilmaameen nin muslimiinta dambi ka galay ayaa isagu soo baxay wadada caanka ah ee Whitehall ee ay halbowlaha ama xudunka magaalada London, iyadoo ay gasho wadada aada dhismaha Baarlamanka & goobo badan oo ka tirsan Westminster.
Bananbaxayaashan oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Mulsimiinta ka soo horjeeda soo duulayaasha oo ay ula jeedaan duulaanka Mareykanka & xulufadiisa ee ka dhanka ah wadamada Afgaanistan, Ciraaq iyo waliba siyaasada reer Galbeedka ee dunida Muslimka.
Wargeyska mail online Hogaamiyaha kooxdaasi Muslimiinta Anjem Choudary oo u dhashay Britain isla markaana ah aasaasaha kooxda Islam4UK oo banaanbaxa ka soo qayb galey ayaa sheegay in Obama uu naftiisa ka dhiay mid yool u ah Muslimiinta mayalka adag ka dib dilkiisii Cusaama Bin Ladin.
Anjem Choudary hogaamiyaha Islam4UK
Choudary wuxuu ku baaqay in Obama la soo istaajiyuo maxkamad shareecada si loogu qaado lugta uu ku leeyahay dagaalka Afagaanistan, wuxuuna ku tilmaamay Obama in uu yahay cadowga koowaad ee Islaamka.
Choudary wuxuu ku tilmaamay Obama in uu yahay dilaa weyn oo dila Muslimiinta kaasi oo ka daran ninkii uu ka guuleystey George Bush. Si la mid ah sida Cusaama Bin Ladin uu ugu yahay cadowga koowaad ee reer Galbedka ayuu Obamana ugu yahay Muslimiinta.
“Waa dambiile dagaal, waana mid aan la iska oraneyn, waa dilaaga Muslimiin fara badan, wuxuu ka sii badan yahay ninkii uu ka guuleystey Bush, wuxuuna sii baahiyey dagaalka ka dhanka Islaamka” ayuu yiri Choudary . “Waa in la soo qabtaa oo waliba la soo taagaa maxkamad Islaami ah si looggu qaado dambiyadiisa dagaal” ayuu hadalkiisa sii raaciyey Choudary oo hortaagnaa xafiiska Ra’isalwasaare David Cameron.
Choudary waxaa kale oo uu sheegay in ay sii socon doonaan mudaharaadyada ka dhanka ah Obama isagoo xusey in dadka taageera Obama ay ka sii badan yihiin kuwa ka soo horjeeda, wuxuu sidoo kale ka hadley qaabkii Mareykanku u dileen Cusaama Bin Ladin wuxuuna yiri. “Waxay sheegaan in ay rumaysan yihiin cadaalada, waxayna ku dhaqmayaan dambiilanimo ay ku dileen nin”.
Askari Booliis ah oo isha ku haya koox banaanbaxayaal ah oo salaad ku jira
“Hadii ay doonayaan inay doonayaan cadaalad, waxay aheyd in ay qabtaan Cusama ayna u qaadaan maxkamad shareeco ayna ku qaadan dambiyada loo haysyo, intii ay ku dhaqmi lahaayeen dambiilinimo & gacan ku dhiiglinimo” ayuu hadalkiisa ku darey Choudary.Banaanbaxayaas ayaa waxay wateen boorar ay ku qoran yihiin ay ka mid yihiin, “Obama Dambiile”, “Obama hogaamiyaha argagixisada”, “aduunyadu waxay u qaybsantey laba xero oo kala ah Islaam & Munaafaq Islaamka ayaana guuleysan doona”, “Islaamku wuxuu ka guuleysan doonaa aqalka cad”, Obama waa hogaamiyaha dilayaasha” & ereyo kale oo fara badan.
Dibaxbaxayaashan ka soo horjeeda Madaxweyne Obama ayaa ciidamada Booliisku isku dayayeen inay dib u celiyaan si ay u xakamayeen, waxaana qaarkood su’aalo waydiiyey ciidamada Booliiska iyagoo ku dhameystey banaanbaxoodii Obama diidka ahaa si nabad ah ku soo afmeertey.